Ndụmọdụ vidiyo Ahịa site na Home Office | Martech Zone
Na nsogbu ugbu a, ndị ọkachamara n'achụmnta ego na-achọpụta na ha nọpụrụ iche ma na-arụ ọrụ n'ụlọ, na-adabere na usoro vidiyo maka nzukọ, ịkpọ oku, na nzukọ ndị otu.
Ugbu a, ana m ekewapụ onwe m iche maka izu na-esote ebe ọ bụ na ekpughere otu enyi m na onye nwalere nke ọma maka COVID-19, yabụ m kpebiri itinye ndụmọdụ ụfọdụ iji nyere gị aka ịkwalite vidiyo dị ka usoro nkwukọrịta gị.
Ndụmọdụ vidiyo ụlọ n’ụlọ ọrụ
Na ejighị n'aka nke akụ na ụba, ị ga-enwe ọmịiko maka nsogbu nke atụmanya ọ bụla na ndị ahịa. Ga-enwerịrị obi ike na enyemaka maka atụmanya na ndị ahịa ọ bụla. A na-eleghara atụmatụ dị ogologo oge anya dịka ụlọ ọrụ na-agbadata ma na-eche echiche. Vidio bụ ihe iji merie ụfọdụ nsogbu ịma aka anyị nwere na njikọ mmadụ, mana ị ga-ebuli ahụmịhe ahụ.
Maka vidiyo, ịchọrọ inwe uche, lọjistik, usoro izipu ozi, yana nyiwe iji bulie njikọ na mmetụta nke ozi gị.
Mwepu, nchekasị, na ejighị ihe n'aka nwere ike imetụta otu esi ele anyị anya. Ndị a bụ ihe ị nwere ike ime iji melite echiche onwe gị yana otu esi ele gị anya.
Obi ekele - Tupu ị banye na vidiyo, tụgharịa uche n’ihe ị nwere ekele maka.
Mgbatị - Anyị bụ ndị ukwuu kwụpụrụ. Mee mgbatị ahụ iji kpochapụ isi gị, wepụ nrụgide, ma wuo endorphins.
Uwe maka ihe ịga nke ọma –Ọ oge ịsa ahụ, ịkpụ afụ ọnụ, na uwe iji nwee ihe ịga nke ọma. Ọ ga - eme ka ị nwekwu obi ike na onye nnata gị ga - enwe nnukwu mmetụta.
Scene - Eguzola n'ihu mgbidi ọcha. Otu ọfịs nwere agba dị omimi na nke ụwa n’azụ gị ga-eji ọkụ ọkụ na-akpọ oku nke ukwuu.
Home Office Video lọjistik
Belata okwu ọ bụla ị ga-enwe na ogo ọdịyo, ogo vidiyo, ọgba aghara na nsogbu njikọta. Lelee ụlọ ọrụ m iji hụ ihe m tinyere ego na otu esi arụ ọrụ ya.
Hardwire - adaberela na Wifi maka vidiyo na ọdịyo, na-agba ọsọ nwa oge site na rawụta na laptọọpụ gị.
-ada - Ejila ndị na-ekwu okwu na mpụga gee ntị, jiri earbuds.üAudio - Audio bụ isi, nweta nnukwu igwe okwu ma ọ bụ jiri igwe okwu gị iji belata mkpọtụ ndabere.
Iku ume & gbatia - Jiri iku ume diaphragmatic tupu vidiyo gị ka agụụ ghara ịgụ gị oxygen. Gbatịa isi na olu tupu ịmalite.
Kpọtụrụ Anya - Ọnọdụ igwefoto gị na ma ọ bụ karịa ọkwa anya ma lee igwefoto ahụ dum.
Nsogbu - Tụgharịa notma Ọkwa na ekwentị gị na desktọọpụ.
Atụmatụ Nkwurịta Okwu Vidio Azụmaahịa
Vidiyo bu ihe di ike, ma ikwesiri iji ya mee ihe maka ike ya ka i wee nwee ike inwe oke ihe.
Nzuzo- Emefula oge ndị mmadụ. Mee ihe ị ga-ekwu ma banye kpọmkwem n'isi ihe ị na-ekwu.
Mmetụta Ọmịiko - N’amaghị ọnọdụ onye na-ele gị anya, ị nwere ike igbochi ịkpa ọchị.
Nye Uru - N'oge ndị a na-ejighị n'aka, ịkwesịrị ịnye uru. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịre ahịa, ị ga-eleghara ya anya.
Ekekọrịta Resources - maka ozi ndị ọzọ ebe onye na-ele gị nwere ike nyocha onwe ya nke ọma.
Nye Enyemaka - Nye ohere maka olile anya gị ma ọ bụ onye ahịa gị ịgbaso. Nke a abụghị ọrịre!
Ofdị nyiwe vidiyo
Webinar, Nzukọ na nyiwe Nzukọ - Mbugharị, Uberconference, na Google Hangouts bụcha nnukwu ọgbakọ mkparịta ụka ngwanrọ maka 1: 1 ma ọ bụ 1: Ọtụtụ nzukọ. Enwere ike ịdekọ ha ma bulie ha na ndị na-ege ntị.
Social Media Live nyiwe - Facebook na Youtube Live bụ ezigbo usoro ntanetị mmekọrịta maka mmekọrịta na nnukwu ndị mmadụ.
Ntanetị Ahịa & Email - Loom, Dubb, BombBomb, Covideo, OneMob -enyere gị aka-ndekọ na gị na ihuenyo na igwefoto. Zipu ihe ngosi na email, duru gi, ma tinye onu na CRM gi.
Nchịkọta vidiyo - Youtube bụ ka nke abụọ kasị ukwuu search engine! Tinye ya ebe ahụ ma bulie ya. Vimeo, Wistia, na nyiwe azụmaahịa ndị ọzọ pụtara ìhè.
Social Media - LinkedIn, Twitter, Instagram niile na-enye gị ohere ịmekọrịta ọwa mmekọrịta gị niile iji kesaa ma kwalite vidiyo na usoro ha. Kpachara anya na ikpo okwu ọ bụla nwere adịghị ike n'ogologo vidiyo gị.
Enwere m olileanya na ndị a na-enye enyemaka dị ka ị na-arụ ọrụ na vidiyo si n'ụlọ na nsogbu a!
Tags: google hangoutsụlọ ọrụWebinar Ahịavideo ogbakovideo uchenyiwe vidiyovideo atụmatụvideo Atụmatụvideo aghụghọ
Gịnị bụ IP Warming?